Rivalry Ongororo: Brock Lesnar vs The Undertaker - Wwe
Rivalry Ongororo: Brock Lesnar vs The Undertaker
Brock Lesnar naThe Undertaker vaive nemakwikwi emakwikwi akatanga munzira yese kumashure muna 2002.
'Chikara' uye 'The Deadman' vakakwikwidza mumitambo yakawanda yakaita se'Gehena muSero 'mutambo paGehena muSero 2015, mutambo kuChirimweSlam 2015, uye mutambo kuWrestleMania XXX.
Brock Lesnar uye The Undertaker's WrestleMania XXX kukakavara kuchaverengerwa pamwe chete nemamwe maviri kukakavara mune yavo storied trilogy. Pakupedzisira, iyo Brock Lesnar vs Undertaker kukwikwidza kuchaverengerwa seyakazara.
Undertaker naBrock Lesnar vakatarisana pasi kuWrestleMania XXX
zvekutaura nezveshamwari yako
Musi waFebruary 24, 2014 edition yaRaw, The Undertaker akadzoka ndokupikisa Brock Lesnar kumutambo kuWrestleMania XXX. 'The Deadman' akabva akachidza 'Chikara' kuburikidza netafura yekubatana uye akatarisa pachiratidzo cheWrestleMania XXX.
Kuburikidza nemavhiki ari kuuya, Brock naUndertaker vakatengesa mazwi nemitauro yekuchinjana vachienda mukurovera kwavo kwakanyanyisa. Pakuenda kumba Raw pamberi peWrestleMania XXX, Brock Lesnar akasiya The Undertaker akarara neF5.
Naiye Undertaker akakuvara kare mukurwa kwavo kweWrestleMania XXX, mhando yemutambo yakadzikira nemahombekombe akakura.
'Chikara' chaifanira kutiza Tombstone Piledriver, ndokudzoreredza imwe Tombstone Piledriver kunorovera chechitatu F5 pane matatu kuverenga.
Mhinduro kubva kuWrestleMania XXX vateereri yaive chinguva munhoroondo, paive nemaoko pamusoro pemisoro pese paMercedez-Benz Superdome
Brock Lesnar akatyora Iyo Undertaker isina kumboitika 21-0 WrestleMania streak.
Chiyero cheMatch: 1.5
Hama Dzakanaka dzinoratidza kana dzakabatsira IMPACT kusaina chero imwe yaimbove nyeredzi dzeWWE [Exclusive]
Zvakanakisa uye zvakaipisisa zveWWE Hell muSero 2017- 9 Gumiguru, 2017
ROH Rufu Risati Ranyadziswa Mhedzisiro
CM Punk yakahwina mari kangani muhombodo yeBhangi?
Maitiro Ekurara Kurara nekukurumidza: 8 Nzira Dzokutsvedza Kubva Mune Rekodhi Nguva
5 WWE Superstars vaivenga nziyo dzenyaya yavo
zvinotora nguva here kudanana
runyorwa rwezvinhu zvekuita kana iwe wabora
mameseji ekutumira mushure mekutanga zuva
zvekuita kana iwe uine chiso chakashata
sign your ex anoda kudzokerana